Andian-taranaka Voalohany Sy Faharoan’ireo Holandey, Manontany Tena Raha Horaisina Ho Toy Ny Olompirenena Ihany Indray Andro Any · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Mey 2017 16:18 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, русский, Ελληνικά, Português, 日本語, Español, English
Betsaka kokoa noho ny nipetrahany tany Indonezia no nipetrahan'i Linawati Sidarto tao Amsterdam, saingy lazainy fa mihevitra ny tsy ho afaka hahatsapa mihitsy ho Holandey izy. Sary: Venetia Rainey
Ity tantara avy amin'i Venetia Rainey ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 16 May 2017. Naverina navoaka etoana ho ampahany amin'ny fiarahana miasa misy amin'ny PRI sy ny Global Voices.
Tetezin'i Linawati Sidarto ireo talantàlana kely rehetra ao amin'ilay toko kely iray, na trano fivarotana entamadinika indoneziana, ao Amsterdam.
“Mila mahazo sambal aho mazava loatra, ilay saosy mafàna,” hoy i Sidarto eo am-pifantenana tavy iray lehibe feno rihitra mena mivaivay fampiasa mahazatra amin'ny nahandron-tsakafo indoneziana.
Matetika i Sidarto, 51 taona, no tonga ao amin'ity toko ity hividy sakafo mampahatsiahy azy ny firenena niaviany. Teraka tany Jakarta izy, saingy nonina tao Amsterdam nandritry ny 19 taona, be lavitra noho ny nipetrahany tany Indonezia. Holandey ny vadiny ary roavavy ny zanany izay nofaritany hoe “tena Holandey tanteraka”. Misosa ihany koa izy rehefa miteny Holandey — kanefa tsy mbola mahatsapa foana ho tafiditra ho anisany.
“Misy teny somary manambàny ireo mpifindra monina [tsy tandrefana], dia ny allochtoon” izany, hoy i Sidarto manazava. “Hiteny mandrakariva ireo zanako hoe, ‘Eny, ry Neny, allochtoon ianao, tsy hahatakatra velively mihitsy.'”
Mihomehy izy alohan'ny hanampiany hoe: “Vazivazy izany, kanefa misy fahamarinany ihany ao ambadika ao. Ara-pihetsehampo dia tsy hahatsapa ho toy ny Holandey velively aho. Angamba aza mety tsy hahavita mihitsy hilaza fa hoe Holandey aho.”
Io fanontaniana io hoe “iza no Holandey?” — sy ny dikan'ny atao hoe Holandey, ary iza no mahavita manapaka hevitra — dia efa niadiana hevitra be tao Holandy nandritry ny volana vitsivitsy lasa, narahan'ny fifidianana nampisara-bazana tamin'ny Martsa, nihodinkodina nanodidina ny olan'ny maha-izy azy ny tena, ny fidirana anaty fiarahamonina ary ny Silamo. Ilay politisiana avy amin'ny elatra farany havanana, Geert Wilders, no nitàna toerana be tamin'ny fandrehetana fihetsehampo manilika ireo mpifindramonina. Nisy ampahany tamin'ny kabary fandresena lahatra nataony ihany koa no nalain'ilay Praiminisitra amperinasa, Mark Rutte. Ny taratasy misokatra nalefany ho an'ny vahoaka ao Holandy mba “hihetsika araka ny tokony ho izy na hivoaka hiala” dia betsaka no nandika azy ho toy ny antso atao amin'ireo mpifindramonina mba hiditra ho anaty fiarahamonina — na ho voatelina mihitsy aza — araka izay tratrany.
Kanefa, ho an'ireo izay vao haingankaingana ihany no tonga tao, toa an'i Sidarto, tsy moramora foana ny fandehany.
“Tsy voatey hamela moramora ny hafa hiditra ao anatin'ny faribolany anatiny [ry zareo Holandey] ,” hoy izy manazava, mahatsiaro ireo taona voalohany nodiaviny tao fony izy tany amin'ny faha-30 taonany. “Tsy miantso anao hiaraka hisakafo na hisotrosotro aminy any an-tranony izany ry zareo. Manàja anao izy any am-piasàna, ary rehefa hifandao. Tena sarotra dia sarotra ho ahy izany tany am-piandohana.”
Tonga avy any Indonezia, zanatany Holandey fahiny, miteny tsy miambakavaka ilay teny i Sidarto, efa talohan'ny nahatongavany tao aza ary efa nanana fianakaviana nonina tao Holandy. Na izany aza, mbola tolona ataony ny hahatonga azy io ho tanindrazany. Na ankehitriny aza, betsaka amin'ireo namany no mpifindramonina hafa na teratany Holandey nipetraka tany ivelany.
Ho an'i Kami Zarker, 42 taona, tena sarotsarotra no niainany izany hoe fiezahana ho lasa Holandey izany.
Toy ny mpifindramonina avy any Iràna no nahatongavan'i Zarker tao tamin'ny 1994; 21 taona izay tamin'izany, tsy nahay na kely aza tamin'izay teny Holandey ary tsy nanana fahalalàna momba an'i Holandy. Ao amin'ny zaridainam-boninkazo iray ao Amsterdam, toerana falehany mba hatsiarovany kely ny firenena niaviany, izy no manazava ny fomba nataony, tamin'ireo taona voalohany niainany teto, niasa mafy mba hahay ny teny Holandey ary nàka namana. Nolavina ny fangatahany fialokalofana, saingy ho solony dia vitany ny nahazo fahazoandàlana hianatra, ary farany dia nomena zom-pirenena izy.
Manambady Iraniàna izao i Zarker ary niteraka roa any Amsterdam. Rehefa mandeha miverina any Iràna izy, lazainy fa tsy mahatsapa ho ao amin'ny fireneny — nefa tsy mahatsapa tanteraka ho ao amin'ny fireneny koa izy any Holandy. Mivazivazy izy mamaritra ny tenany ho 60 % Holandey ary “40% ny tenany ihany”.
“Mihevitra aho fa na ho 100 taona mahery aza no hipetraka eto, tsy ho tena Holandey mihitsy,” hoy i Zarker sady manainga soroka. “Miezaka ny ho izany aho, saingy tsy izay.”
Ho an'ireo andian-taranaka faharoan'ireo mpifindramonina, mbola tsilo manindrona kokoa ny olan'ny hoe hatraiza no maha-Holandey azy ireo.
“Mahazo io fanontaniana io foana aho,” hoy i Huda Abu Leil, 22 taona, mpianatra ho mpikarakara ara-tsosialy izay teraka tao Holandy. Avy any Palestina ny rainy ary avy any Maraoka ny reniny. “‘Inona no tsapanao? Mahatsapa ve ianao ho Palestiniana sa Maraokàna sa Holandey?'”
“Indraindray aho mahatsapa ho Holandey, saingy miaraka amin'ireny zavatra rehetra mitranga eto amin'izao tontolo izao ireny, dia tsy [toy ny] Holandey no fahitan'ireo olona HoIandey ahy,” hoy i Abu Leil manampy, misy fahasorenana kely anatin'ny feony. “Mihevitra mandrakariva aho, ‘Oh, OK, inona moa aho izany?'”
Sekoly miozolmana no ianaran'i Abu Leil eto ary mitondra sarondoha afatotra eny an-doha izy. Lazaina fa iray amin'ireo namany ihany no tsy miozolmana, izay “hafahafa” ihany no fahitàny azy. Na izany aza, tsy nahatsapa velively ho tsy maintsy nanamarina ny mombamomba azy tamin'ny hafa izy, afa-tsy indray mandeha ihany.
Eo am-pandrarahana dite maraokàna, sakafo fototra iray ao an-tokantranony, tsaroany ny tranga iray niseho nandritry ny taona voalohany nianarany tao amin'ny anjerimanontolo fony nanome tsiny azy sy ireo namany miozolmana ireo mpiray kilasy taminy hoe “mitsitokotoko” loatra. Tsy hitan'i Abu Leil izay olana — lazainy fa mandeha mitsitokotoko tahaka izany ny tsirairay ao amin'ny anjerimanotolo misy azy. Lasa niha-henjana ka nisy profesora iray niditra an-tsehatra ary nanontany izay zavatra nitranga tamin'i Abu Leil sy ireo namany .
“Dia tezitra izahay, satria noheverinay ho toy ny hoe, ‘Inona no alehanareo aty aminay, maninona ianareo no tsy miresaka amin'ireo mpiray kilasy [koa]? Nahoana no izahay hatrany? Inona no tsy nety nataonay?’ Rehefa misaina momba azy io aho, dia mahatezitra sy mampikorontan-tsaina ahy.”
Ny fiheverana hoe ireo vao tonga dia tsy maintsy mandeha kilaometatra fanampiny mba hifanaraka amin'ny zavamisy dia zavatra iray efa mahazatra ao Holandy, tena toy ny any amin'ny firenena maro.
Saingy hatraiza no tsy maintsy alehan'ny olona iray izay nanorina ny fiainany teto mba ho raisina amin'ny maha-izy azy ireo sy hahatsapa ho toy ny mpikambana anaty fiarahamonina?
Nitatitra ity tantara ity avy any Amsterdam i Venetia Rainey .